Qof ku baryayaaye, ii sheeg sida ay u Xiriirada iyo sawiro ka Sony Xperia Z wareejiyo aan 6s iPhone cusub? Waxaan apprieciate lahaa oo dhan caawimaad ka heli karaa, Anigu waxaan haystaa files muhiim u badan ee aan Sony Xperia Z in aan sameeyo ma doonayo in aan iska.
Hel iPhone ah, sida iPhone 6s Plus ama 5s iPhone, iyo haatan si ba'an u raadinayaan xal si ay u gudbiyaan xiriirada ka Sony Xperia si iPhone? Waa kuma sidii ay adag tahay sidii aad u malaynayso ah. Halkan, waxaan ku qor baxay 2 xal kaas oo kaa caawin doona inaad wareejiyo xiriirada Sony Xperia si iPhone effortlessly fudud, iyadoo aan loo eegin ay ku badbaadi on xasuusta telefoonka ama xisaab-aad.
Habka 1: xiriirada Transfer ka Sony Xperia si iPhone 1 click
Habka 2: Saxiixa files VCF ka Sony Xperia in Google oo u hagaagsan in iPhone
Bedelka xiriirada Sony Xperia si iPhone oo leh cinwaan email, magaca shirkada iyo dheeraad.
Xiriirada Transfer labada on xasuusta telefoonka iyo xisaab, sida Google Facebook, Twitter, iwm
Beddelaan iyo audio iyo video ka guuraan Sony Xperia si iPhone
Copy photos, jadwalka iyo fariimaha qoraalka ah ka Sony Xperia si iPhone.
1-riix kala iibsiga, iyadoo tayada waayi maayo.
Taageer qalabka Sony Xperia in ordi Android 2.1 ama ka dib, iyo iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS ku salaysan arrimo 9/8/7/6/5.
Tallaabada 1. Run Wondershare MobileTrans on your computer
Download Wondershare MobileTrans on your computer. Ogaaw in aad xor si ay u rakibi. Waa softwware virus-free. Ka dib markaas, waxaa lagu daahfuri on your computer. Waxaad arki doonaa suuqa kala aasaasiga ah sida soo socota. Ka dib markaas, xiriiriyaan Sony Xperia iyo iPhone la your computer siday u kala horreeyaan.
Tallaabada 2. sahlo ah "Phone Transfer" feature
Marka diyaarinta shaqo diyaar u yahay, guji "Phone in Transfer Phone" ee uu furmo suuqa hoose, oo halkan idinku wadi doonaa, oo labada aaladaha aad waxaa lagu soo bandhigaa sida il iyo caga si gooni gooni ah. Hubi in aad iPhone waa meel ka mid ah. Haddii aan, waxaad bedelan kartaa meelaha telefoonada aad adigoo gujinaya "Flip".
Tallaabada 3. xiriirada ka dhaqaaq Sony Xperia si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5/4 / 4s / 3GS
Content ayaa kuu soo gudbin karaa waxay ku qoran yihiin dhexe ee suuqa kala. By default, dhammaan waxa ku jira kara in la qaadsiiyo ayaa la hubinayaa. Haddii aad rabto inaad u guurto xiriirada Sony Xperia si iPhone, fadlan uncheck faylasha kale. Markaas, guji "Start Copy" si ay u bilaabaan kala iibsiga xiriir ah.
Habka 2: Saxiixa files VCF ka Sony Xperia in Google oo u hagaagsan in iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Haddii aadan rabin in la isticmaalo software kasta oo leedahay xisaabta, sida Google, aad dhoofin karo xiriirada sida file VCF ah iyo geliyaan in xisaabta. Markaas, nidaamka xisaabta ku qoran iPhone.Here, waxaan xisaabta ku Google sida tusaale.
Tallaabada 1. telefoonka Sony Xperia, tuubada Xiriirada app. Tubada Xiriirada tab.
Tallaabada 2. tuubada button ka tagay si button guriga. Dooro Import / Dhoofinta> dhoofinta in Kaydinta USB ama dhoofinta in kaarka SD. File VCF waxaa lagu magacaabi doonaa sida 00001.vcf, 00002.vcf, 00003.vcf iyo sii ..
Tallaabada 3. Hadda, xiriiriyaan Sony Xperia in computer oo dalka buuraha leh oo ah drive dibadda adag. Fur ay folder card SD oo file VCF in computer ka dhoofin.
Tallaabada 4. gasho aad Gmail. Riix Xiriirada si ay u muujiyaan suuqa kala xiriir ah. Riix More . In ay hoos u soo dejiyey menu, dooran Import ... .
Tallaabada 5. In uu furmo suuqa pop-up ah, guji Dooro File iyo dajiyaan faylka VCF la doonayo.
Tallaabada 6. fur aad iPhone iyo tuubada Goobta > Mail, Xiriirada, Kalandarada > dar xisaabta ... > kale > account CardDAV dar . Ku qor server, magacaaga iyo isgarad. Tubada Next dhammayn Mudanayaasha.
Tallaabada 7. Open xiriirada app aad iPhone iyo xiriirada waxaa si otomaatik ah synced.
More Dhibaatooyinka Guides u iPhone aad u baahan tahay
Dardar iPhone in Orod macruufka 8 Fast
3 Hababka in Recovery iPhone SMS
macruufka 8 Dhibaatooyinka iyo Solutions Waxaad u
> Resource > iPhone > 2 Methods si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Sony Xperia si iPhone